» कसले पाउँछ वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री ?
कसले पाउँछ वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री ?
७ बैशाख २०७७, आईतवार ०६:१४
मकवानपुर, ७ बैशाख । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ अहिले लकडाउनका कारण स्थगित छ । नेपालमा लकडाउन हुनुपूर्व यस सिजनको वाईल्ड कार्ड राउण्ड सम्पन्न भएको थियो । वाईल्ड कार्डमा उत्कृष्ट १० भित्र परेर बाहिरिएका ५ जना प्रतियोगीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । ५ जनामध्ये वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीमा कसले सफलता पाउँलान् त्यसको रिजल्ट नेपाल आईडलका दर्शक र वाईल्ड कार्डमा सहभागी भएकाहरुले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । विश्व नै समस्यामा परिरहेको बेला यो रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने निक्र्यौल छैन । तर पनि नेपाल आईडलका दर्शकहरुले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुमध्ये कसले वाईल्ड कार्ड राउण्डमा जित हासिल गर्लान् भन्नेमा बहस गरिरहेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेका मध्ये ३ जना प्रतियोगीहरुको वाईल्ड कार्ड जित्ने सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । बाँकी दुई जनाका बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु । वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि भिडेका रचना रिमाल, ममता गुरुङ र मिग्मा लामामध्ये वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाउने बलियो सम्भावना कसको कस्तो छ ? यस भिडियो सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ । तपाईको विचारमा यी ३ प्रतियोगीमध्ये कसको बलियो सम्भावना छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी पहिलो प्रतियोगी हुन् रचना रिमाल । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उनी उत्कृष्ट ८ सम्ममात्र पुग्न सफल भएकी थिर्इंन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डभन्दा अघि कुनै पनि अवार्ड नजितेकी रचनाले वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भएकी थिईन् । झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल रिमाललाई धेरै दर्शकहरुले सानी बहिनीका रुपमा लिने गरेका छन् । सुमधुर आवाज र ईनोसेन्ट नेचरका कारण उनी धेरै दर्शकहरुको रोजाईमा परेकी छिन् । पहिले पनि सर्वाधिक भोट ल्याएर तहल्का मच्चाएकी उनलाई दर्शकहरुले सर्वाधिक भोट दिएको आसा गरिएको छ जसका कारण उनी गाला राउण्डबाट छनौट हुने बलियो आधार भएको दर्शकहरु बताउँछन् । उनका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् ममता गुरुङ । यसअघि उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेर बाहिरिएकी ममता गुरुङ नेपाल आईडल सिजन ३ को मञ्चमा सबैको मन जित्न सफल प्रतियोगी हुन् । उत्कृष्ट ९ मा पुगेसँगै ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी ममता त्यसपछि शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । ममता सिजन ३ मा मेलोडियस आवाजका कारण चर्चित छिन् । उनका प्रस्तुतिहरु पनि फितलो देखिएका छैनन् । रेडियो जक्कीका रुपमा कार्यरत उनलाई उनका श्रोताहरुले पनि साथ दिएको अनुमान गरिएको छ । श्रोताहरुको भोट र दर्शकहरुको भोटका कारण उनी वाईल्ड कार्ड राउण्डमा विजेता हुने सम्भावना रहेको दर्शकहरु बताउँछन् । साथै आफ्ना प्रस्तुतिहरुमार्फत निर्णायकको समेत मन जितेका कारण उनी बलियो दाबेदारका रुपमा उभिएकी छिन् । उनका केही कभर तथा ओरिजिनल गीत पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी तेस्रो प्रतियोगी हुन् हेटौँडाकी मिग्मा लामा । मिग्माले नेपाल आईडलमा उत्कृष्ट १० सम्म पुगेर चर्चा कमाएकी थिईन् । उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा प्रविण बेड्वालसँग युगल प्रस्तुति दिएकी मिग्माले पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेता पनि उनी शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । शोबाट बाहिरिएपछि उनले एउटा डुयटका साथै एउटा सोलो गीत पनि रेकर्ड गराएकी थिईन् । उनले प्रतियोगितामा ३ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मिग्माले एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड र २ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । नेपाल आईडलको स्टेजमा रक स्टारको छवि बनाएकी मिग्माका केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत सार्वजनिक भईसकेको छ । विभिन्न लाईभ कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी भएकी उनले निर्णायकहरुको मन जितेकी छिन् । उनको फ्यान फलोईङ समेत राम्रो भएका कारण उनले वाईल्ड कार्डमार्फत ईन्ट्री गर्नसक्ने दर्शकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।